Gel Flekosteel na-eji mbelata 50% zụta na Nigeria
Flekosteel na nigeria
Zụrụ Flekosteel Nkwụsị Mgbu Mgbu
Flekosteel bụ gel dị irè megide nkwonkwo na mgbu azụ. Usoro ọgwụgwọ ga-enyere aka wepụ ihe mgbu, wepụ nfụkasị ahụ ma nye gị ohere ịlaghachi ndụ ndụ. Ị nwere ike zụta ọgwụ na Nigeria n'ọnụ ọnụ ọnụ ahịa ₦14990 na webụsaịtị onye nrụpụta. A kwadoro ngwaahịa a, arụmọrụ nke ngwaahịa nkwonkwo Flekosteel egosipụtara site na ọmụmụ ụlọ ọgwụ.
Nyocha onye ọrụ Flekosteel
Abdulqadir Udeh, 32 Afọ, Ilorin
Abụ m onye egwuregwu na nkwonkwo mgbu bụ ihe na-emekarị na ọrụ m. Gel Flekosteel na-enyere aka mee ka ahụ dị jụụ mgbe ọzụzụ ma ọ bụ asọmpi gasịrị, yana mee ka anụ ahụ dịkwuo elu. M na-eji ude ahụ eme ihe mgbe niile, ma ọbụna na ngwa a, ngwaahịa ahụ na-enye nsonaazụ.
Rotimi Chukwu, 37 Afọ, Port Harcourt
Na 50, nkwonkwo na-eme ka onwe ha nwee mmetụta, na ikpere m malitere ịtụgharị n'ime mgbede ma ọ bụ na mberede mgbanwe okpomọkụ. Nzọpụta m hụrụ na ude Flekosteel, nke dọkịta dụrụ m ọdụ. Ụdị dị iche iche nke ọgwụ ahụ na-eme ka obi sie ike, ihe si na ya pụta na-eme ka ọ ghara inwe obi abụọ banyere ịdị irè nke ọgwụ ahụ.
Abba, 65 Afọ, Port Harcourt
Flekosteel bụ ezigbo ude maka nkwonkwo mgbu. Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịkwaga, ogologo ije na-akpata mgbu na ọzịza na nkwonkwo gị, ana m akwado ka ị jiri ude. Flekosteel gel nyeere m aka, ma otu ọnwa mgbe usoro ọgwụgwọ gasịrị, enwere m ike ịlaghachi ndụ na-arụsi ọrụ ike.
Ndụmọdụ ndị dọkịta
Dọkịta Rotimi Emeri
Afọ iri na ise
A na m akwado Flekosteel nye ndị ọrịa m kemgbe ọtụtụ ọnwa ugbu a, ọtụtụ alaghachila kelee m maka ọgwụgwọ ọrụ ebube. Flekosteel na-anagide ọtụtụ pathologies nkwonkwo, na-edozi ọrụ nke sistem musculoskeletal, na-eweghachi mmegharị. Tụkwasị na nke ahụ, a na-ahọrọ ihe ndị dị na nkwadebe ahụ n'ụzọ na ọ bụghị nanị na ha na-enyere aka iwepụ mgbu na ọzịza, kamakwa na-anagide ihe kpatara nsogbu ahụ. Ị nwere ike ịzụta gel na webụsaịtị onye nrụpụta. Ọ bụ otu n'ime ọgwụgwọ nkwonkwo kachasị dị irè na Nigeria.
Flekosteel - Ọgwụgwọ nkwonkwo siri ike
Balm Flekosteel bụ ọgwụ ọhụrụ emepụtara iji weghachi ọrụ nkwonkwo. Gel nwere mmetụta na-ekpo ọkụ na mgbochi mkpali, na-eme ka ahụ dịkwuo mma ma na-eme ka mmeghari nke akụkụ ahụ emetụtara nke usoro musculoskeletal. Ị nwere ike ịtụ ude maka nkwonkwo na mbelata na webụsaịtị onye nrụpụta.
Njirimara bara uru nke Flekosteel
Ndị dọkịta si mba ọzọ mepụtara ọgwụgwọ zuru ụwa ọnụ. Ihe dị iche iche nke ọgwụ ahụ bụ n'ime ihe okike ya na enweghị ihe mejupụtara kemịkal. Njirimara bara uru nke gel maka nkwonkwo:
mkpochapụ mmetụta na-egbu mgbu;
ịgbalite usoro mgbake;
mwepụ nke edema;
mkpochapụ nke foci nke mbufụt;
ike nke cartilaginous na connective anụ ahụ.
Iji ọgwụ eme ihe ga-enye ohere iji weghachite ọrụ nke nkwonkwo ma laghachi na ndụ nkịtị. Kwa ụbọchị, ụfọdụ n'ime ihe ndị kachasị mkpa nke usoro musculoskeletal na-enwe nrụgide dị ukwuu, ya mere ọ bara uru ilekọta ahụike ọkpụkpụ. Ị nwere ike ịtụ Flekosteel gel online site na ịgbakwunye ngwaahịa na ụgbọ ibu gị.
Uru nke Flekosteel karịa analogues
Uru nke ọgwụ a gụnyere:
Ntughari. Ngwaahịa dị mma maka ndị ọrịa na-eto eto na ndị agadi. Ihe mejupụtara nke ihe mejupụtara ya na-anagide ọrịa afọ na traumatic pathologies nke nkwonkwo.
Enweghị contraindications na mmetụta. Emere nke a n'ihi ihe mejupụtara eke.
Ịrụ ọrụ dị elu. Enwere ọtụtụ nyocha na netwọk banyere mmetụta dị mma nke gel na nkwonkwo. Ndị ọrịa na-akọ ọgwụgwọ ọkpụkpụ zuru oke na obere oge.
Ogo ekwere nkwa. A kwadoro ngwaahịa nke onye nrụpụta. Ngwaahịa agafeela ule ụlọ ọgwụ wee gosipụta ịdị irè nke ihe ndị ahụ.
Onye ọ bụla nyere iwu ọgwụ na webụsaịtị onye nrụpụta nwere ike ijide n'aka na Flekosteel na-enye gị ohere imezu ihe ịchọrọ. Naanị ugbu a, ọ ga-ekwe omume ịzụta gel maka nkwonkwo na mbelata mara mma. na obodo Naijiria.
Ihe mejupụtara ngwa ọrụ Flekosteel
Ndị ọkà mmụta sayensị kachasị mma na ndị dọkịta na-arụ ọrụ na usoro nke gel. Flekosteel gụnyere ihe ndị a:
Bodyagi wepụ - mara ya maka mgbochi mkpali Njirimara. Ihe ahụ, na-abanye n'ime akpụkpọ ahụ, na-ekpo ọkụ na anụ ahụ ma wepụ mmetụta na-egbu mgbu.
Mwepụta nke afụ ọnụ ọla edo - nwere mmetụta antitumor. Akụkụ ahụ na-ebelatakwa ihe mgbu na mpaghara emetụtara ma mee ka usoro mmeghari anụ ahụ dịkwuo elu.
Eucalyptus mmanụ dị mkpa - nwere mmetụta mgbochi tumor. Akụkụ ahụ na-ebelatakwa ihe mgbu na mpaghara emetụtara ma mee ka usoro mmeghari anụ ahụ dịkwuo elu.
ose Cayenne na mkpuchi - na-ebelata ihe mgbu na ọzịza ọbụna n'ọnọdụ ndị kachasị njọ. Site n'enyemaka nke akụrụngwa, meziwanye ọbara ọgbụgba.
Mmanụ dị mkpa na ginger - na-arụ ọrụ dị ka tonic, na-eme ka usoro metabolic dịkwuo elu na anụ ahụ ma wepụ mbufụt.
Soybean na mmanụ ọka - Na-ebelata ihe mgbu, na-eme ka ahụ dị jụụ.
Cinnamon mmanụ dị mkpa - Na-ebelata mbufụt, na-eme ka ọbara na-erugharị ma na-ekpochapụ nsị site na ahụ, na-egbochi ọrịa.
Mmanụ Camphor - ihe na-eme ka anụ ahụ dị ọkụ ma na-ebelata usoro mkpali.
Ọrụ mgbagwoju anya nke ihe ndị ahụ na-enye gị ohere iwepụ ihe mgbu nkwonkwo n'ime obere oge. Usoro ọgwụgwọ gel ga-enyere aka igbochi ihe ize ndụ nke ịlaghachi azụ ma weghachite onye ọrịa ahụ na ndụ na-arụsi ọrụ ike.
Flekosteel Joint Cream agaala ule ụlọ ọgwụ. Ndị ọrụ afọ ofufo mere usoro ọgwụgwọ ọgwụ wee gosipụta mmụba n'ọrụ sistemu musculoskeletal. Nsonaazụ ule:
95% nke isiokwu
Anyị kpochapụrụ ihe mgbu kpamkpam.
94% nke isiokwu
Anyị kpebiri ịga usoro nke abụọ maka prophylaxis ma nye iwu ka a gbakwunye tube nke ude ọzọ.
100% nke ihe nyocha
Enweghị mmetụta ọ bụla a hụrụ.
Ọtụtụ ndị dọkịta na ndị ọrịa nọ na Naịjirịa na-akwado ọgwụ a. Ebipụtala ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nyocha na netwọkụ na-akwado ịdị irè nke ude eke, na enwere ike ịhụ ụfọdụ n'ime ihe ndị a na webụsaịtị onye nrụpụta.
Ị nwere ike ịtụ Flekosteel gel megide mgbu na nkwonkwo na azụ Flekosteel ugbu a na webụsaịtị onye nrụpụta. Naanị ihe ị chọrọ bụ ịgbakwunye ngwaahịa na ụgbọ ala gị wee dejupụta akwụkwọ ndenye ọpụpụ. Ịkwụ ụgwọ maka ude - mgbe ị nwetasịrị iwu, na ọnụahịa nke ₦14990 na kedu ihe na-eri na mba ndị ọzọ. Ọ bụrụ na enyere gị aka ịkwụ ụgwọ mbụ, yabụ ndị a bụ ndị scammers. Onye nrụpụta gọọmentị anaghị achọ ịkwụ ụgwọ mbụ.
Ebee ka m nwere ike ịzụta Flekosteel na nigeria?
Flekosteel na Ilorin Flekosteel na Yaba
ịtụ ịtụ Flekosteel 50% mbelata